‘प्रेम गीत’को कभर गीत, हेरौं अब कस्को होला जित ? « Mazzako Online
‘प्रेम गीत’को कभर गीत, हेरौं अब कस्को होला जित ?
माघ २९ गतेबाट नेपालभर रिलिज हुने चलचित्र ‘प्रेम गीत’को ‘कभर कम्पिटिसन’मा ५५९ जना नव गायक गायिकाहरुले भाग लिएका छन् । ‘म यस्तो गीत गाउछु’, बोलको गीतको कभर भिडियोहरु निर्माण कम्पनी आशुसेन फिल्मस्को युटुब च्यानलमा अपलोड गरिएको छ । यी भिडियो मध्येबाट सबैभन्दा धेरै भ्यु भएका भिडियोहरु बाट टप टेन छनौट गरिनेछ । त्यस्तै यदि कसैको गायकी राम्रो भईकन पनि भ्यु कम भएको छ भने ती प्रतिभाहरुलाई पनि थप मौका दिदै ‘वाईल्ड कार्ड’बाट उत्कृष्ट १५ मा लगिनेछ ।
यी मध्येबाट फाईनलमा संगीतकार अर्जुन पोख्रेल, गायिका अञ्जु पन्त र गायक सुगम पोख्रेलको निर्णायक मण्डलले एक जनालाई उत्कृष्ट छान्नेछ । फागुन ८ गते वृहत सांगीतिक कन्सर्टको आयोजना गरेर उत्कृष्ट छानिने जानकारी गराईएको छ । प्रेम गीतको कभर कम्पिटिसनको विजेताले कलर्स मोबाइलको तर्फबाट नगद एक लाख पुस्कार र आशुसेन फिल्मस्को आगामी फिल्ममा गीत गाउने अवसर पाउने कुरा शुक्रबार एक पत्रकार भेटघाटको कार्यक्रम गरि जानकारी गराईएको छ ।
आशुसेन फिल्मस्को आधिकारीक युुटुब च्यानल बाहेकका च्यानलबाट अपलोड गरिएका भिडियोलाई यो कम्पिटिसनमा मानयता नदिईने चलचित्रका निर्माता सन्तोस सेनले जानकारी गराएका छन् । यदि एउटै भिडियो निर्माण कम्पनीको अफिसियल च्यानल आशुसेन फिल्मस्को आधिकारीक युुटुब च्यानल भन्दा बाहिर अरु च्यानलबाट पनि अपलोड गरिएको छ भने सो भिडियोलाई हटाउन पनि अनुरोध गरिएको छ ।
सुदर्शन थापाको निर्देशनमा बनेको चलचित्र प्रेम गीतलाई सन्तोष सेनले निर्माण गरेका हुन् । चलचित्रमा पूजा शर्मा र प्रदिप खड्का मुख्य भूमिकामा छन् । भ्यालेन्टाईनको माहोलमा चलचित्रलार्य ग्रान्ड रिलिजको तयारी गरिएको छ ।